Diyaarad ku shaqeysa ileyska qoraxda oo ka duulimaad taariikhi ah ka bilowday Abu Dhabi (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Diyaarad ku shaqeysa ileyska qoraxda oo ka duulimaad taariikhi ah ka bilowday Abu Dhabi (Sawirro)
A warsame 9 March 2015 9 March 2015
Abu Dhabi: Garoon ku yaala magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, ayaa saaka oo ah 09-03-2015 waxa ka duushay diyaar ku shaqeynaysa ileyska qoraxda, oo lagu magacaabo Solar Impulse-2.
Diyaarada oo leh hal kursi oo keliya ayaa baalasheeda waxa ugu xiran qalab u soo jiidaya cadceeda qaraxda, qalabkaas waxa la sheegay in uu la dhanyahay baalasha diyaarada nooca Jymbo Jet.
Diyaaraddan ku shaqeysa solarka ayaa saaka u dhaqaaqay dhanka dalka Saldanadda Oman, waxeyna uga sii gudbi doontaa dalka Myanmar (Burma) iyo China.
Shanta bilood ee soo socota, diyaarada ayaa la filayaa in ay isaga gooshto qaaraddaha adduunka, ayna dul marto labadda badweyn ee Pacific-ga iyo Atlantic-ga.
Duulimaadkan tijaabadda ah ayaa waxaa diyaaraddan oo leh hal kursi duulin doona, laba nin oo u dhalatay dalka Switzerland oo la kala yiraahdo Bertrand Piccard iyo Andre Borschberg.
Inta ay ku jiraan safarkooda, waxa ay ku degi doonaan dalal kala duwan, iyaga oo gudbin doona fariin ku aaddan isticmaalka tiknoolajida nadiifka ah ee aan deegaanka waxyeeleyneyn.
Diyaarad noocan oo kale ah oo la yiraahdo Solar Impulse-1, ayaa sanadkii 2013-kii si wanaagsan ugu dul duushay dalka Mareykanka oo dhan.
Balse madaama diyaaradda laga doonayo in ay dunida oo dhan dul marto, ayaa waxaa loo dhisay qaab ka duwan tii hore, iyada oo la ballaariyay.
Diyaaraddan cusub ayaa leh baalal balacuudu gaarayo 72 mitir, halka culeyskeeduna dhanyahay 2.3 tan, kaasoo in badan ka fudud diyaaradaha caadiga ah. Fudeydkaasi ayaa muhiim u ah guusha duulitaanka diyaaraddan oo la dhisay muddo 12 sano ah.
Sidoo kale, baalashada diyaaradda ayaa waxaa saaran in badan 17,000 oo ah unugaha keydiya ileyska qoraxda, waxaana ay leedahay bateri khaas ah oo u sahlaya in ay habeenkii duusho.
Duuliyaha diyaaradda ayaa looga baahan yahay in uu feejignaado oo uu si wanaagsan u duuliyo.
Haddii ay dhacdo in diyaaradda ay ku dul qaraabto baddaha Pacific-ga ama Atlantic-ga, waxa ay labada nin isticmaali karaan qalab diyaaradda saaran, kaasoo ay ku dabbaalan karaan ilaa iyo inta laga badbaadinayo.
Wasiir Diini: Guriceel waxaan ku arkay 8 sano jir qori loo dhiibay halkii iskuul loo diri lahaa
Waqtiga doorashada Somaliland oo dib loo dhigay